Amazon dia nandefa 'dongle' handefasana sy hihaino mozika amin'ny iPhone miaraka amin'izay | Vaovao momba ny gadget
Amazon dia nandefa 'dongle' hahafahana mandefa sy mihaino mozika amin'ny iPhone miaraka amin'izay
Ruben gallardo | | Accessories, Amazon
Tsy i Apple irery no nanapa-kevitra ny hanala ilay jack audio 3,5-millimeter amin'ny volavolainy finday. Vao tsy ela akory izay i Google dia nanao toy izany ihany koa tamin'ny vaovao Google Pixel 2. Na izany aza, satria tapaka ny hevitra fa hofoanana io fifandraisana io avy amin'i Cupertino dia nisy ny olana nipoitra: ary ankehitriny ahoana no hataoko mitondra sy mihaino mozika miaraka amin'izay? Ary izany ve ny port Lightning dia tompon'andraikitra amin'ny fanatanterahana an'io asa io.
Na izany aza, misy orinasa sasany nanapa-kevitra ny hamaha ity olana ity. Angamba iray amin'ireo malaza indrindra i Belkin. Ny orinasan-tserasera momba ny teknolojia malaza dia manome adaptatera misy seranan-tsambo tselatra handoavana ny finday ary a Jack 3,5mm hahafahana mampifandray finday. Ny vidin'ity fitaovana ity dia 34,99 euro. Ankehitriny, Amazon, ao anatin'ny sokajy "AmazonBasics" dia nanolotra ny vahaolana manokana. Mora kokoa izy io ary manome fiasa fanampiny tena mahaliana ihany koa.
Amazon, ilay goavambe amin'ny varotra an-tserasera, dia mahafantatra foana fa afaka manolotra vahaolana ho an'ny olana rehetra. Amin'ity sokajy ity dia afaka mahita ny zava-drehetra ianao avy amin'ny kitapom-batsy mba hitaterana ny solosaina finday mankany amin'ny totozy, tsihy, tariby mifandray, sns. Ary izao dia ampiana adaptatera misy seranana tselatra ary jack audio.
Araka ny fanambarana momba ny varotra, Ity dongle avy any Amazon ity dia mifanaraka amin'ny iPhone 7 sy iPhone 7 Plus. Heverinay fa izany no hiasa amin'ny iPhone 8 sy ny zokiny lahy, ny dikan-teny Plus. Ary koa, ny zavatra tena mahaliana amin'ity fitaovana ity dia azonao atao ihany koa fehezo ny habetsaky ny dian-tongotra milalao ianao, ary koa mamaly na mamarana ny antso.
Nefa mitandrema, satria raha toa lafo ny vidin'ny kinova Belkin, Ity fitaovana Amazon ity dia manolotra fiasa bebe kokoa ary mampihena ny vola 29,99 euro miaraka amin'ny fandefasana maimaim-poana raha toa ianao ka mpampiasa ny serivisy Prime.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » Gadgets » Accessories » Amazon dia nandefa 'dongle' hahafahana mandefa sy mihaino mozika amin'ny iPhone miaraka amin'izay
1Password extension ho an'ny Microsoft Edge izao no misy
Izany no fomba fiasan'ny WhatsApp Business, izay efa nanomboka ny fitsapana voalohany nataony tany Espana